Chineke kwere nkwa ịkpọlata ndị Izrel, gwọọkwa ha (1-24)
30 Jehova gwara Jeremaya, sị: 2 “Mụnwa bụ́ Jehova Chineke Izrel kwuru, sị, ‘Dee ihe niile m na-agwa gị n’akwụkwọ. 3 Jehova kwukwara, sị, “Oge na-abịa mgbe m ga-achịkọta ndị m a dọọrọ n’agha, bụ́ ndị Izrel na ndị Juda.+ M ga-akpọlata ha n’ala m nyere ndị nna nna ha. Ha ga-ebirikwa na ya ọzọ.”+ Ọ bụ Jehova kwuru ihe a.’” 4 Ihe ndị a ka Jehova gwara ndị Izrel na ndị Juda. 5 Jehova kwuru, sị: “Anyị anụla mkpọtụ ndị na-ama jijiji. Ụjọ na-atụ ndị mmadụ, udo adịghịkwa. 6 Biko, chọpụtanụ ma nwoke ọ̀ na-amụ nwa. Gịnịzi mere m ji ahụ ka nwoke ọ bụla siri ike na-ejide aka n’afọ*Ka nwaanyị na-amụ nwa?+ Gịnị mere ihu onye ọ bụla ji gbarụọ? 7 Ewoo! Ụbọchị ahụ bụ ụbọchị dị egwu.*+ E nweghị ụbọchị ọzọ dị ka ya. Ọ bụkwa oge Jekọb ga-ata ahụhụ. Ma m ga-azọpụta ya.” 8 Jehova nke ụsụụ ndị agha kwuru, sị, “N’ụbọchị ahụ, m ga-agbaji yok ha nya n’olu, dọbiekwa agbụ e kere ha ụzọ abụọ. Ndị ala ọzọ agaghịzi eji ha mere ndị ohu. 9 Ha ga na-efe Jehova bụ́ Chineke ha ofufe, na-ejekwara Devid, bụ́ onye m ga-ahọpụta ka ọ bụrụ eze ha, ozi.”+ 10 Jehova kwukwara, sị, “Ohu m Jekọb, atụla ụjọ. Izrel, atụkwala egwu.+ N’ihi na m ga-esi ebe dị anya zọpụta gị,Zọpụtakwa ụmụ gị n’ala a dọọrọ ha n’agha laa.+ Jekọb ga-alọta, ahụ́ ga-erukwa ya ala. E nweghị ihe ga-enye ya nsogbu. E nweghịkwa onye ga-emenye ya ụjọ.”+ 11 Jehova kwuru, sị, “M nọnyeere gị, ka m wee zọpụta gị. Ma, m ga-ebibi mba niile m chụgara gị n’ala ha.+ Ma, agaghị m ebibi gị.+ Kama, m ga-adọ gị aka ná ntị* otú kwesịrị ekwesị. M ga-atarịrị gị ahụhụ.”+ 12 Jehova kwuru, sị: “Ọkpụkpụ gị nke gbajiri agbaji enweghị ngwọta.+ Ahụ́ i merụrụ agaghị ala ala. 13 E nweghị onye na-arịọ ka a gwọọ ọnyá gị. E nweghị otú a ga-esi gwọọ gị. E nweghịkwa ike ịgwọta gị. 14 Ndị niile gị na ha na-eme enyi echefuola gị.+ Ha anaghịzi achọ gị. N’ihi na apịala m gị ụtarị otú mmadụ si apịa onye iro ya.+ Ataala m gị ahụhụ otú onye obi tara mmiri si ata mmadụ ahụhụ, N’ihi na njehie gị hiri nne, mmehie gị dịkwa ọtụtụ.+ 15 Gịnị mere i ji eti mkpu maka ọkpụkpụ gị gbajiri agbaji? Ahụ́ na-egbu gị mgbu agaghị akwụsịN’ihi na njehie gị hiri nne, mmehie gị dịkwa ọtụtụ.+ Ọ bụ mụnwa mere gị ihe a. 16 N’ihi ya, a ga-ebibi ndị niile chọrọ ibibi gị.+ A ga-adọrọkwa ndị iro gị niile n’agha.+ A ga-akwakọrọ ihe ndị na-akwakọrọ ihe gị. M ga-enyefe ndị na-ebukọrọ ihe gị n’aka ndị ga-ebukọrọ ihe ha.”+ 17 Jehova kwuru, sị, “M ga-eme ka ị gbakee. M ga-agwọkwa ọnyá gị,+N’agbanyeghị na ha niile jụrụ gị, na-asịkwa: ‘Lee Zayọn, nke ọ na-enweghị onye na-achọ ya.’”+ 18 Jehova kwukwara, sị: “M ga-akpọkọta ndị e si n’ụlọikwuu Jekọb dọrọ n’agha.+ M ga-emetere ụlọikwuu ya dị nsọ ebere. A ga-arụghachi obodo ya n’ala ya dị mkputamkpu.+ Ụlọ elu ya ga-adịkwa n’ebe o kwesịrị ịdị. 19 Ha ga na-abụ abụ ekele, na-achịkwa ọchị.+ M ga-eme ka ha mụbaa. Ha agaghịkwa adị ntakịrị.+ M ga-eme ka ha dị ọtụtụ,*Ha agaghịkwa adị ole na ole.+ 20 Ụmụ Jekọb ga-adị otú ha dị n’oge gboo. M ga-eme ka ha kwụrụ chịm n’ihu m.+ M ga-ata ndị niile na-emegbu Jekọb ahụhụ.+ 21 Jehova kwuru, sị, “Otu n’ime ndị ya ga-abụ onye ukwu. Otu n’ime ụmụ ya ga-abụkwa onye ọchịchị. M ga-akpọ onye ukwu ahụ ka ọ bịa nso. Ọ ga-abịakwutekwa m. N’ihi na ònye ga-anwa anwa bịakwute m ma ọ́ bụghị onye m kpọrọ ka ọ bịa?” 22 “Unu ga-abụ ndị m.+ Mụnwa ga-abụkwa Chineke unu.”+ 23 Jehova ga-amalite iwe iwe otú oké ifufe si amalite ife.+ Otú ahụ oké ifufe si efesi ike ka ọ ga-esi wesa ndị ajọ omume iwe. 24 Iwe Jehova agaghị adajụRuo mgbe o mere ihe dị ya n’obi.+ Unu ga-aghọta ihe a n’oge ikpeazụ.+
^ Ma ọ bụ “gbanyere aka n’úkwù.”
^ Na Hibru, “oké ụbọchị.”
^ Ma ọ bụ “m ga-agbazi gị.”
^ O nwere ike ịbụ, “ka a na-akwanyere ha ùgwù.”